Electric shock massager ၏အခြားအမည်များမှာ pulse massager နှင့်အကြိမ်ရေနည်းသောကုထုံးကိရိယာဖြစ်သည်. ဒါက electrotherapy ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်, မကြာခဏရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးသို့မဟုတ်နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်. နိမ့်ကြိမ်နှုန်းကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသည်အခါ, အားနည်းသောအရာသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြိမ်နှုန်း နည်း၍ အသုံးပြုသည်. The electrode…
လည်ပင်း massager ၏ဆိုးကျိုးများဘာတွေလဲ
123Next >...10 စာမျက်နှာ 1 ၏ 10
အဆောက်အ ဦး B ၏ကြမ်းပြင်,Xixiang Haoye ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံ,Xixiang လမ်း,Baoan ခရိုင်,ရှန်ကျန်းမြို့.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်။ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့အီးမေးလ်ကိုထားခဲ့ပါ၊ 24 နာရီ.
Shenzhen JIANYIKANG နည်းပညာ CO ။, LTD © 2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး သင်္ဘောပေါ်လစီပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ